Isha Bariga Dhexe ee Qadar oo Boqor Salmaan ku Timaantay Shaydaan – Radio Daljir
Isha Bariga Dhexe ee Qadar oo Boqor Salmaan ku Timaantay Shaydaan
May 30, 2017 4:19 g 0
London – Mareegta loo yaqaan Isha Bariga Dhexe (Middle East Eye) oo ah mid laga leeyahay dalka Qadar ayaa sii xoojisay dagaalka afka ee ka dhexeeya Sacuudiga iyo Qadar.
Mareegta oo dabajoogta kulankii Trump iyo Boqor Salmaan iyo xafladdii furitaanka xarunta ladagaallanka argagixisada ee Riyaad ee ay Boqor Salmaan iyo Trump gacmaha wada saareen dhalo nal ka dhex iftiimayo ayaa sawir-gacmeed kulankaas matalaya u sawiray mid ay labada huggaamiye shaydaanka ugu baaqeen in uu soo xaadiro oo soo shaqo galo.
Sawir-gacmeedka ayaa muujinaya Trump, Boqor Salmaan iyo madaxweyne El-Sisi oo dhulka hoose ee shayaadiintu ku negaato baaq u diraya, una sheegaya in shaydaanku soo hawl-galo. Shaydaankii oo baaqa ku faraxsan ayaa muujinaya sida uu diyaarka u yahay, kuna sii farxaya mala-awaalkiisa carruur badan oo la laayey oo meydkoodu carada daadsanyahay.
Mareegtaas iyo kuwa kale oo ay ku jirto tan Al Jazeera Talafishin ayaa laga mamnuucay Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Bilahaan waxaa jira khilaaf sii xoogaysanaya oo u dhexeeya hugaamiyaha Qadar, Shiikh Tamim bin Al Thani, iyo dawladda Sacuudiga. Shiikh Thani ayaa taageeray Iran iyo xulafada Iran ee Xamaas iyo Xisbullah, kana horyimid qorshaha Imaaraadka, Baxreyn, iyo Masar, iyo waxa uu Shiikh Thani ugu yeeray dagaal aan jiho lahayn oo lala beegsanayo Qadar.